VOLVO EC380D HYDRAULIC EXCAVATOR (မြေတူးစက်)
မြေကြီးတူးစက် မြေကြီးသယ်စက် နှင့် မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ ကြီးမားသော အင်ဂျင်ပါဝါအင်အားနှင့်တူးဖော်ခြင်း၊ဟိုက်ဒြော်လစ်စက်စီးဆင်းမူကြောင့်မြေကြီးတူးဖော်ရာတွင်အလွယ်တကူတူးဖော်နိုင်ခြင်း၊ကန်တူးဖော်ခြင်း၊ ရေမြောင်းများအသစ်တူးခြင်း၊ သောင်တင်သောနေရာများတွင် မြစ်ကြောင်းများပေါအောင်တူးဖော်ပေးခြင်း၊စက်၏ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်ပါဝင်မူကြောင့် ဆည်မြောင်းတူးဖော်ရာတွင် နည်းစနစ်ကျခြင်း သောက်ရေကန်တူးခြင်း၊ ရွာလမ်းများဖို့ပေးနိုင်ခြင်းစသည့်အကျိုးကျေးဇူးများရရှိစေနိုင်ပြီး ကြာရှည်စွာအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Gasoline Engine TOSAKI 5.5 hp FEATURE High quality Gasoline engine Easy to start Long - lasting , durable engine High power Low fuel consumption APPLICATION Used in various applications Install with the paddle boat Install with the mowers Can be use for any application
A coupling is connect two shafts together at their ends for the purpose of transmitting power. Couplings do not normally allow disconnection of shafts during operation, however there are torque limiting couplings which can slip or disconnect when some torque limit is exceeded.The primary purpose of couplings is to join two pieces of rotating equipment while permitting some degree of misalignment or end movement or both. By careful selection, installation and maintenance of couplings, substantial savings can be made in reduced maintenance costs and downtime.
It isashaft which transmits the power developed by the engine to the various parts of the vehicle.In layman&#039;s term, it isalink between the input and output of the vehicle. Without crankshaft your vehicle won&#039;t even move an inch though your engine will be running.You will agree that due to combustion of fuel in the cylinder, energy is generated and due to this the piston moves downwards during the power stroke. This reciprocating motion of the piston is converted to rotary motion of the crank (Crank is the bell like structure which you can see in the image above ). With this crank, crankshaft also rotates. This crankshaft is then connected to the gearbox ofavehicle. Thus it is responsible for transmission of power.
ကားBattery အားနဲ. ကား၊ခြံရေဆေးနိုင်မယ့် Pressure ပါဝါ ကားရေဆေးစက်ကို Rocket တွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီ။ cigarette light = 3m (၉ပေ) Pressure ပိုက်အရှည်က 8m (၂၅ ပေ) ရှိပါမယ်။ 16 L ရေထည့်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Pump က 40Watts အားနဲ. ဖြန်းဆေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်း - ၅၈၀၀၀ ကျပ် Delivery free in Yangon တခြားမြို.များကိုတော့ ကားဂိတ်အထိသာ ပို.ပေးနိုင်ပါသည်။ ဝယ်ယူလိုပါက ဖုန်းလေး ဆက်ပေးပါ။ 09264686461 (Male) also viber 09784419691 (Female) also viber 09961127000 (Female) Message ပို.ပြီးလည်း မှာယူနိုင်ပါတယ်။ http://m.me/rocketonlineshopping ကြိုက်နှစ်သက်သည့် Social Media တစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍ Rocket တွင် Order တင်နိုင်ပါပြီ။ 09264686461 ကို သူငယ်ချင်းအဖြင့် contact တွင် save ထားလိုက်ပါ။ Messenger / Viber / Line / WeChat / Bee Talk / Whatup / Tango / MyChat / DMM(ဒို.မြန်မာ) ဒုံးပျံကဲ့သို့ အရှိန်နဲ့ လူကြီးမင်းတို့ အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးမယ့် Rocket...
ကျေက်ထုတ်လုပ်ငန်းများအတွက် အထူးသင့်လျော်သော Hydraylic Hammer Breaker စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားခြင်း။ ကြာရှည်ခံစွာအသုံးပြုနိုင်ခြင်း။ ဆူညံသံလျော့ပါးခြင်းနှင့်တုန်ခါမှုနည်းပါးခြင်း။ အကျိုးသက်ရောက်မှုအကောင်းဆုံးနှင့်ခိုင်မာမှုရှိခြင်း
Car Holder မျိုးစုံကို တစ်ပေါင်းတည်း စုစည်းပေးထားတဲ့ Car Holder Kit ကို Rocket တွင် ရရှိနိုင်ပါပြီ။ စုပ်ခွက် ပါတဲ့အတွက် ကားပေါ်မှာ အသုံးပြုဖို. အကောင်းဆုံး Car Holder များ ဖြစ်ပါတယ်။ ကားရဲ. air con ထွက်ပေါက်တွင်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒီတိုင်း အိမ်က ခုံပေါ်မှာ ရုပ်ရှင်ကြည့်ရန်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အနီးကပ် မြေပုံများ ကြည့်ဖို.လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ မိမိဖုန်းကို နေရာမျိုးစုံ ပြောင်းလည်း ထားနိုင်မည့် Car Holder Kit ကို အခုပင် ဖုန်းဆက်ဝယ်ယူလိုက်ပါ။ ဈေးနှုန်း - ၁၉၀၀၀ ကျပ် (Delivery free in Yangon) မြန်မာနိုင်ငံ မြို.ကြီးများ အားလုံးကို အိမ်အရောက်ပို.ခ ၃ထောင်ကျပ်ပါ။ များများဝယ်ရင် ပို.ခ လျော့ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ www.rocketonlineshopping.com ဝယ်ယူလိုပါက 09264686461 09784419691 09961127000 ကိုဆက်သွယ်ပြီး မှာယူနိုင်ပါတယ်။ ကြိုက်နှစ်သက်သည့် Social Media တစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍ Rocket တွင် Order တင်နိုင်ပါပြီ။ 09264686461 ကို သူငယ်ချင်းအဖြင့် contact တွင် save ထားလိုက်ပါ။ Messenger / Viber / Line / WeChat / Bee Talk / Whatup / Tango / MyChat / DMM(ဒို.မြန်မာ) ဒုံးပျံကဲ့သို့ အရှိန်နဲ့ လူကြီးမင်းတို့ အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးမယ့် Rocket...
ကျန်းမာရေးကောင်းစေရုံမက ခန္ဓာကိုယ် ဘော်ဒီလေးပါ လှပစေဖို. ကား ထိုင်ခုံ ကူရှင်လေးကို Rocket တွင် မှာယူလိုက်ပါ။ တင်လှစေကာ နာကျင်မှုများလည်း သက်သာစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကားထိုင်ခုံ သာမက ရုံးထိုင်ခုံ၊ ကျောင်းက ထိုင်ခုံတွေပေါ်မှာလည်း ထားကာ အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ နေ.စဉ် အထိုင်များတာဟာ ကျော်ရိုးကို ထိခိုက်စေပါတယ်။ ကားမှာ နှစ်နာရီ အလုပ်မှာ ၈နာရီ အစားစာချိန်မှာ ၄နာရီ စသဖြင့် ထိုင်ကြရတာပါ။ ဒါကြောင့် ကျန်းမာရေး ကောင်းစေဖို. အငြောင်း မမိစေဖို.နဲ. ကျောရိုး မနာစေဖို. အခုပင် ဝယ်ယူလိုက်ပါ။ ခြေသလုံးကိုလည်း သက်သာစေရန် ဒီဇိုင်းဆွဲပေးထားပါတယ်။ ရရှိနိုင်သော အရောင်များ ပန်း အမဲ အပြာ မီးခိုး အညို ဈေးနှုန်း 75000 (Delivery free in Yangon) PreOrder ဖြစ်လို. နှစ်ပတ်စောင့်ရပါမယ်။ ပိုက်ဆံ ကြိုပေးစရာ မလိုပါ။ ရန်ကုန်မြို.ပြင် = ၂ထောင်ကျပ် နေ.ချင်းအမြန် = ၂ထောင်ကျပ် မြန်မာနိုင်ငံမြို.ကြီးအားလုံး အိမ်အရောက် ၃ထောင်ကျပ် တခြား မြို.များကိုတော့ ကားဂိတ်အထိသာ ပို.ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဝယ်ယူလိုပါက 09264686461 (Male) also viber 09784419691 (Male) 09768484878 (Female) also viber ကိုဆက်သွယ်ပြီး မှာယူနိုင်ပါတယ်။ Message ပို.ပြီးလည်း မှာယူနိုင်ပါတယ်။ http://m.me/rocketonlineshopping ကြိုက်နှစ်သက်သည့် Social Media တစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍ Rocket တွင် Order တင်နိုင်ပါပြီ။ 09264686461 ကို သူငယ်ချင်းအဖြင့် contact တွင် save ထားလိုက်ပါ။ Messenger / Viber / Line / WeChat / Bee Talk / Whatup / Tango / MyChat / DMM(ဒို.မြန်မာ) ဒုံးပျံကဲ့သို့ အရှိန်နဲ့ လူကြီးမင်းတို့ အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးမယ့် Rocket...
High Quality Double Scissor Car Lift
တစ်မှုထူးခြားတဲ့ဒီဇိုင်းဖြစ်သောကြောင့်မော်ဒယ်မြင့်ကားများ အလယ်တန်း သေးငယ်တဲ့ထရပ်ကားများ ဘတ်စ်ကားများ အမျိုးမျိုးသောကားများကိုပြုပြင်ထိန်သိမ်းရေးများကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Car Washing Portable (PreOrder)
ရေကန်ထဲမှ ရေကို ဖြစ်စေ၊ ရေပုံးထဲမှ ရေကို ဖြစ်စေ အလွယ်တကူ ထုတ်ယူ ပစ်ဖြန်းနိုင်မည့် Car Washing Portable ကို Rocket တွင် ဝယ်လို. ရပါပြီ။ Cigarette Lighter လေး နဲ. အသုံးပြုနိုင်ပါမယ်။ လွယ်ကူစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါမယ်။ ဈေးနှုန်း - ၁သိန်း Delivery free in Yangon PreOrder ဖြစ်တဲ့အတွက် ၂ပတ်လောက် စောင့်ရပါမည်။ ပိုက်ဆံ ကြိုပေးစရာ မလိုပါဘူး ရန်ကုန်မြို.ပြင် = ၂ထောင်ကျပ် နေ.ချင်းအမြန် = ၂ထောင်ကျပ် မြန်မာနိုင်ငံမြို.ကြီးအားလုံး အိမ်အရောက် ၃ထောင်ကျပ် တခြား မြို.များကိုတော့ ကားဂိတ်အထိသာ ပို.ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဝယ်ယူလိုပါက 09264686461 (Male) also viber 09784419691 (Male) 09768484878 (Female) also viber ကိုဆက်သွယ်ပြီး မှာယူနိုင်ပါတယ်။ Message ပို.ပြီးလည်း မှာယူနိုင်ပါတယ်။ http://m.me/rocketonlineshopping ကြိုက်နှစ်သက်သည့် Social Media တစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍ Rocket တွင် Order တင်နိုင်ပါပြီ။ 09264686461 ကို သူငယ်ချင်းအဖြင့် contact တွင် save ထားလိုက်ပါ။ Messenger / Viber / Line / WeChat / Bee Talk / Whatup / Tango / MyChat / DMM(ဒို.မြန်မာ) ဒုံးပျံကဲ့သို့ အရှိန်နဲ့ လူကြီးမင်းတို့ အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးမယ့် Rocket...
FEATURE Starting torque and current similar to those of capacitor start motor Stable operation comparing capacitor for operation Large stalling torque considerably low noise and vibration Larger space requirement due to incorporationg two capacitor APPLICATION Can be use to rotary air compressor Can be use with sawyer cutting steel Can be apply to all types of machines
Hydraulic Excavators Power
The hydraulic excavator&#039;s power, durability, ease of servicing and its precise control increase its effectiveness and life expectancy. With the DX140LC, DOOSAN offers an excellent return on investment.The work rate of the hydraulic excavator is directly linked to the performace of its operator. DOOSAN designed the DX140LC by putting the operator at the centre of the development goals. The result is significant ergonomic value that improves the efficiency and safety of the operator.The performance of the DX140LC hasadirect effect on its productivity. Its new &quot;Common Rail&quot; engine and new e-EPOS controlled hydraulic system have combined to create an unbeatable hydraulic excavator, withacost/performance ratio that makes the DX140LC even more appealing.The reliability ofaproduct contributes to its overall lifetime operating costs. Doosan uses computerassisted design techniques, highly durable materials andaquality engineered structure. Our research and development engineers test all product under the most extreme conditions. Durability, reliability and product longevity are Doosan&#039;s top priorities.&quot;Short maintenance operations at long intervals increase the availability of the equipment on site. DOOSAN has developed the DX140LC withaview to high profitability for the user.
YAMAHA Outboard engine 15FMHS
Yamaha သည်ပဲ့ချိတ်အင်ဂျင်ထုတ်လုပ်ရာတွင် နှစ်ပေါင်းမျာစွာအလွန်ကျော်ကြားသော အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပြီး အခြား Brand များထက်ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးများနှင့်ဖွဲ့ စည်းထားပါသည်။